अधिनायकवादको छायामा ओली सरकार | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
अधिनायकवादको छायामा ओली सरकार
२०७५ श्रावण २, बुधबार ०९:४७ गते
यतिखेर खुब जोडतोडका साथ नेपालमा अधिनायकवादको जन्म हुँदैछ भन्ने किसिमका प्रचारबाजी गरिँदै छ । सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ कि यो मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भई यसै शासनपद्धतिअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संघीय संसद्अनुसार जनप्रतिनिधिहरुको चलखेल बढेको छ । नयाँ संविधान बनिसकेको र कानुन पनि धमाधम बन्न लागिरहेको अवस्था छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय गरी तिनै तहका सरकार बनेका छन् । सबै तहमा विकास बजेटको विनियोजन गरिएको छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले क्रमिकरुपमा संस्थागत हुने बाटोको खोजी गरिरहँदा र यसैअनुरुप बामे सरिरहँदा यो मुलुकमा किन अधिनायकवाद आउने हल्ला पिटिँदै छ ? ताज्जुब र आश्चर्यलाग्दो विषय भनेको यही हो ।
अर्को मह¤वपूर्ण कुरा, दुईवटा व्यक्तिवादी कम्युनिस्ट पार्टीका बीच एकता भई तिनीहरुबाट सञ्चालित बलियो कम्युनिस्ट पाँचैवर्ष सरकारले निरन्तरता पाउने र त्यसैका माध्यमबाट मुलुकले लोकतन्त्रसँगै गाँसिन आएको अधिनायकवादको जन्म हुनुमा कतै षड्यन्त्र त छैन ? भन्ने प्रश्नले अहिले ठाउँ पाएको छ । जे होस्, लोकतन्त्रमा सबैलाई छूट छ । तर, संविधानबाहिरबाट यस्ता परिवर्तनको खोजी गर्नु मूर्खतासिवाय अरु केही हुनेछैन । अर्को मह¤वपूर्ण खोजीको विषय त के रहेको छ भने यसका पछाडि कम्युनिस्ट सरकारले स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन र दिनु पनि पर्दैन । किनकि, यो सरकार दुई तिहाइ बहुमतबाट बनेको छ र जनताको साथ छ । अभिमतबाट बनेको सरकारले ठाउँ–कुठाउँ स्पष्टीकरणको हिसाबमा बोलिरहनु पर्दैन । किनकि, आफ्नै कारणबाट अधिनायकवाद जन्मन गयो भने त्यसको हिसाबकिताब सरकारमा रहेकाहरुले जनतासमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले लोकतन्त्रको चीरहरण गरिएको अधिनायकवादको कल्पनासमेत गर्न सक्दैनन् । अर्को मह¤वपूर्ण पक्ष के रहेको छ भने लोकतन्त्रभित्रै जन्मने अधिनायकवाद र लोकतन्त्र समाप्त गरेर जन्मने अधिनायकवादमा आकास–पातालको फरक देखिन्छ । दुई तिहाइको घमण्ड गर्दै र कम्युनिस्ट भएको गर्व गर्दै मनपरी किसिमले काम गर्दै जाने हो भने त्यहाँ त अधिनायकवादको जन्म हुन्छ र लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनमा सांसद्हरुले बजेटसम्बन्धी सोधेको प्रसंगमा त्यस्ता जिज्ञासाको सही तरिकाले उत्तर नदिई आफ्नो कुरालाई अधिनायकवाद हो भन्ने प्रसंगसँग जोडेका छन् । ओली महोदयलाई अधिनायकवादको भूतले किन बारम्बार सताइरहनछ ? यस्तो प्रसंग उसले किन र के कारणबाट प्रस्तुत गरिरहन्छन् ? गहन खोजीको विषय भनेकै यही हो । प्रम ओलीले आफू कमजोर भएको महसुस भएर हो वा अन्य कारणले हो, अरुलाई अधिनायकवादको भूतले सताइरहन्छन् । यो विडम्बना नै हो कि कुनै पनि प्रधानमन्त्री मन लाग्यो भन्दैमा आफ्नै कुनै नसुहाउने हल्लाको पछाडि दौडिँदैन । प्रधानमन्त्री त निश्छल र अविचलित भइरहेकै अवस्थामा रहँदै मुलुकलाई कसरी विकासको बाटोमा अग्रसर गराउने भन्नेमा नै दत्तचित्त रहेको हुन्छ ।
यो सबैेले सुनेकै र जानेकै कुरा हो कि विगत केही दिनयतादेखि कांग्रेस नेतृत्व गणबाटै मुलुक अधिनायकवादतर्फ मोडिँदै छ । प्रतिपक्षमा रहेर प्रतिपक्षकै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नेहरुले चलाएको हल्लामा चासो राख्दै घन्टैपिच्छे स्पष्टीकरण दिँदा प्रधानमन्त्रीको अरु हैसियत नै रहँदैन । कांग्रेस बाटो हराएको बटुवाजस्तो भएको छ, जहाँ जे मन लाग्छ त्यही बोलिरहेको छ ।
कम्युनिस्ट सरकारका मन्त्री, सांसद् तथा स्थानीय निकायका सरकारहरुबाट जनअपेक्षाविपरीत काम हुँदै जाने, भ्रष्टाचारका श्रृंखलालाई अझ बढवा दिने, आफ्ना नातागोता र कार्यकर्ताहरुको मात्रै पक्षपोषण गर्ने, कमिसनमा डुब्ने आदि मनोवृत्ति नै स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति हुन् र यसैका कारणबाट अधिनायकवादको जन्म हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । सुरूमा दलीय मनोवृत्तिको अधिनायकवादले मुलुकभर जनतालाई दुःख दिँदै जाने र अति भएपछि खति हुन्छ भनेझैँ बाहिरबाट त्यस्तो शासनपद्धतिका विकाररुपी अधिनायकवादी मनोवृत्ति बोकेका कूटनीतिज्ञहरुको षड्यन्त्रका कारण दलीय अधिनायकवादलाई सखाप पारी सैनिक मनोवृत्तिको अधिनायकवादको जन्म नहोला भन्न सकिँदैन । यस्तो खेल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतकेन्द्रमा आश्रित कूटनीति हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । किनकि, हाम्रो देशमा यी दुवै प्रकारका अधिनायकवादलाई रिजेक्ट गर्न जनताको अपार सहयोग र सद्भावको खाँचो छ ।
सायद कांग्रेसले भन्न खोजेको कुरा यही नै होला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा अधिनायकवाद जन्मिसक्यो, लोकतन्त्रको चीरहरण हुन लागिसक्यो जस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्दै कम्युनिस्टबाट तयार भएको दुई तिहाइको सरकारमाथि प्रहार गर्दैछन् । शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेलले यति कुरो स्पष्टताका साथ भनिदिनुपर्छ कि कस्तो किसिमको अधिनायकवाद आउँदै छ ? दलीय अधिनायकवाद कि दललाई नियन्त्रण गरेर ल्याइने अधिनायकवाद ? जर्मन तानाशाह हिटलरले पनि अधिनायकवाद ल्याएका थिए भने सिंगापुरका तानाशाह महारथीले पनि दलका नेता थुनेर अधिनायकवाद ल्याएका थिए । त्यस्तो अधिनायकवादले त जर्मन र सिंगापुरलाई स्वर्ग पो बनायो । यही भन्न खोजेको हो कांग्रेसले ? तर, यति कुराचाहिँ स्पष्ट भन्नुपर्छ कि जनतामा दृढ इच्छाशक्ति र नेतामा विकास गर्ने चासो भइदियो भने सिंगापुरजस्तो बनाउन नेपाललाई अवश्य पनि सकिन्छ । आफैँ भट्टयाउने, आफै छट्टाउने र दुनियाँ ढँटाउने किसिमको लोकतन्त्र भइदिँदा अरुले औँला ठड्याउने मौका पाएका छन् । यस्तो मौकाका कारण दुनियासँग कांग्रेसले हातमा हात मिलाउँदै लोकतन्त्रमाथि नै धाबा बोलिरहेको छ । सरकार लोकतन्त्रभित्रको अन्तरआत्माबाट अधिनायकवाद खोज्दैछ भने त्यसलाई रोक्न प्रतिपक्षको भूमिका मह¤वपूर्ण हुन्छ । प्रतिपक्ष नै कमजोर भइदिएपछि निश्चय पनि लोकतन्त्रका विरूद्ध षड्यन्त्र हुन्छ । यसलाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
जान्दै र बुझ्दै आएको एउटा असली कुरा के हो भने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ज्योतिषशास्त्रमा विश्वास गर्ने नेता हुन् । ज्योतिष पत्रकार महासंघका एक जना ज्योतिष अध्ययनले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा केही महिनापहिले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आयु ०७५ चैत्रसम्म मात्र हो भन्दै ठोकुवा गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा त्यो भाइरल भएको थियो । साथै, त्यो ज्योतिष अध्ययनले ०७५ सालभित्र नेपालमा ठूला–ठूला नेताहरुमाथि आपत आउने छ भनेको छ । स्वस्ति–शान्तिद्वारा निवारण गर्न सकेको खण्डमा त्यस्तो योगबाट मुक्ति पाइने किसिमको कुराले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । साथसाथै, यसै मेसोमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक गतिविधि पनि बढ्दै गएको र विभाजित भएका राप्रपाहरुले एकीकरण गरी फागुनबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था फर्काउनका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्ने भन्ने प्रचारबाजीले कांग्रेसभित्रको सारा शक्ति पनि त्यसैभित्र समाहित हुन खोजेको त हैन ? भन्ने प्रश्नले ठाउँ पाएको छ ।